How'd it happen and more reports?: Computer Network Engineering ကို ဘယ်လို စတင်လေ့လာမလဲ ?
Computer Network Engineering ကို ဘယ်လို စတင်လေ့လာမလဲ ?
RHC Tenologies ရဲ့
No. 39, Aung Thitsar Street,Quarter (1),near Sin Yay Twin Bus Stop
Kamayut, Yangon, Burma
Call +959799 839599
RHC Video Tutorials တွေကို self study အနေနဲ့ လုပ်လို့ရပါတယ်. ကျောင်းသားတွေ အားလုံး RHC video tutorials တွေကို self study လုပ်ရင်း အလုပ်တွေရသွားကြပါတယ.် လုပ်ငန်းခွင်မှာ project တွေ လုပ်နိုင်သွားကြပါတယ်. ပိုပြီး advanced ဖြစ်တဲ့ topic တွေကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာနိုင်သွားကြပါတယ်. RHC Self-Study Video Tutorials တွေကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာလိုက်ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.Video Tutorials တွေကို RHC Video Tutorials FacebookGroup ကနေ တောင်းယူနိုင်ပါတယ်.RHC Video Tutorials FacebookGroup Link > https://www.facebook.com/groups/1561580174124790/
RHC Video Tutorials FacebookGroup Link > https://www.facebook.com/groups/1561580174124790/
Computer Networking Tutorials in Burmese Language.က Youtute
RHC ရဲ့ မိနစ် ၁၅၀ စာ Basic Networking Tutorials 1 - 30 ကို စတင်လေ့လာပါ၊
မိနစ် ၁၅၀ ဆိုတဲ့အတွက် အချိန် ၂ နာရီခွဲ ကြာပါမယ်၊ တစ်ခေါက်တည်းနဲ့ နားလည်ပေမဲ့ ပိုပြီး သဘောပေါက် မှတ်မိဖို့အတွက် အစ အဆုံး အနည်းဆုံး ၃ ခေါက် မှ ၅ ခေါက် ထိ လေ့လာဖို့ အကြံပြုပါတယ်၊
အဲဒီလို လေ့လာရင်းနဲ့ ဘာတွေတွေ့လာမလဲဆိုရင် video tutorials နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလေ့လာမှုတွေပါ ပါလာပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒါတွေကို ကိုယ်ပိုင် Notes အနေနဲ့ ထုတ်ပါ၊ အဲဒီလို လုပ်ရင် ကိုယ်ပိုင် knowledge တွေ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်၊
ဒီတော့5ခေါက် လေ့လာတယ်ဆိုပါစို့. ဒါဆိုရင် မိနစ် ၁၅၀ x ၅ = ၇၅၀ မိနစ်. ကိုယ်ပိုင် အချိန် ၁၂ နာရီ နဲ့ မိနစ် ၃၀ မြှုပ်နှံဖို့ လိုအပ်ပါမယ်၊ ကျောင်းသားတွေအတွက် တစ်နေ့ကို ၃ နာရီ study လုပ်နိုင်ရင်4ရက်ဆို ပြီးပါတယ်၊
အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင် တစ်နေ့ကို ၁ နာရီ လောက် facebook သုံးတဲ့အချိန်တွေကို လျှော့ပြီး လေ့လာကြည့်ပါ၊ တစ်နေ့ကို ၁ နာရီ ထိုင်ပြီး လေ့လာဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး၊ ရထားစီးရင်း bus ကား စီးရင် lunch break လိုမျိုးမှာ ၁၀ မိနစ်စီလောက် ခွဲထုတ်လိုက်ရင် မိနစ် ၃၀ စာလောက် ထွက်လာပါလိမ့်မယ်၊
ဒါဆိုရင် ညနေ အလုပ်ကနေ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ နောက်ထပ် မိနစ် ၃၀ စာ လေ့လာရုံပါပဲ၊
ပုံမှန် လေ့ကျင့် ခန်း လုပ်သလို လေ့လာသွားရင် ဖြည်းဖြည်းခြင်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ level တစ်ခုကို ဘယ်နှစ်နာရီ အချိန်ပေးပြီး လေ့လာမယ်ဆိုတာ တွက်ချက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Basic Networking Tutorial - 01
Basic Networking Tutorial - 032
Basic Networking Tutorial - 03
Basic Networking Tutorial - 04 Basic Networking Tutorial - 05 Basic Networking Tutorial - 06 Basic Networking Tutorial - 07 Basic Networking Tutorial - 08 Basic Networking Tutorial - 09 Basic Networking Tutorial - 10 Basic Networking Tutorial - 11 Basic Networking Tutorial - 12 Basic Networking Tutorial - 13 Basic Networking Tutorial - 14 Basic Networking Tutorial - 15 Basic Networking Tutorial - 16 Basic Networking Tutorial - 17 Basic Networking Tutorial - 18 Basic Networking Tutorial - 19 Basic Networking Tutorial - 20 Basic Networking Tutorial - 21 Basic Networking Tutorial - 22 Basic Networking Tutorial - 23 Basic Networking Tutorial - 24 Basic Networking Tutorial - 25 Basic Networking Tutorial - 26 Basic Networking Tutorial - 27 Basic Networking Tutorial - 28 Basic Networking Tutorial - 29 Basic Networking Tutorial - 30 Ref:https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMzkmyfR9LY64pZl4zhYehlpXXAtGw
Posted by Ko Nge at Wednesday, March 08, 2017